Logos entanin'ny hosodoko maivana | Famoronana an-tserasera
Ny karazana fisehoana zavakanto isan-karazany dia nipoitra tao amin'ny famolavolana ny mombamomba ny orinasa sy ny famolavolana ny marika sy ny logo. Ohatra tsara dia iray izay entiko aminao anio ary novolavolain'ny angano Pablo Picasso: Ny teknikan'ny sary hosodoko hazavana malaza, na dia marina aza fa talohan'ny nanapahan-kevitr'ity goavana ity hanao fanandramana miaraka aminy, ireo matihanina sy mpanakanto hafa dia nanao fanomezana kely.
Ny fifandraisana amin'ny fampiasana an'ity teknika ity amin'ny famolavolana hajia sy marika fandraharahana dia mitarika antsika amin'ny minimalism hiresaka momba ny angano zavakanto, angano sy foto-kevitra izay tototry ny fotoana.
1 Ny niandohan'ny Light painting
2 Endri-javatra sy ny dikany ny teknika
3 Jiro hosodoko amin'ny famolavolana logo
Ny niandohan'ny Light painting
Nanomboka nanodidina ny taona 1914 izany rehetra izany, fotoana iray niainga ny fivoaran'ny teknolojia fakana sary ary ny momba ny fahatakarana ny fizotran'ny sary amin'ny ankapobeny. Amin'ity toe-javatra ity dia nipoitra ireo mpanaraka ny sary hosodoko maivana, saingy mazava ho azy fa tsy tamin'ny fikasana kanto na zavakanto fa miaraka amina fikasana mazava fanadihadiana sy somary siantifika. Ny tanana voalohany nahatanteraka ny vokatr'izany dia ny an'i Frank Gilbreth sy ny vadiny Lillian Moller Gilbreth izay nampiasa jiro kely hanarahana ny hetsika izay nitranga nandritra ny fanaovana sary lava. Ny tanjona tokana dia ny hanatsara ny fizotrany sy hanatsorana ny asa izay notanterahina tao amin'ny orinasa notantanan'izy ireo.
Na izany aza, taty aoriana sy talohan'i Pablo Picasso, ny mpanakanto Man Ray dia efa nanapa-kevitra ny hanao andrana amin'ity «teknika» vaovao ity, manokana tamin'ny taona 1935, rehefa nomeny andiana sary izahay, ireo dia efa mazava tsara miaraka amin'ny lanjany kanto sy kanto ary mazava. mitondra ny lohateny hoe The Space Space. Mba hanaovana izany dia nosokafany hatramin'ny farany ambony ny vavan'ny fakan-tsary ary nampiasainy koa ny jiro kely kely hamoronana karazana tadio sy tsipika eny amin'ny rivotra. Talohan'ny nidiràn'i Picasso tao anaty teknika dia nampiditra teknikan-jiro strozy i Gjon Mili hisamborana fihetsiketsehana amin'ny sehatra midadasika sy amin'ny fampisehoana iray, zavatra izay mbola ampiasain'ny mpaka sary maro ankehitriny na amin'ny antoandro na amin'ny alina.
Na izany aza, tamin'ny taona 1950 dia nanomboka namorona andian-tsary andrana i Picasso izay voataona sy nahazo aingam-panahy avy amin'ny teknikan'i Gjon Mili, izay an'ny silhouette an'ny centauro amin'ny alàlan'ny loharano kely iray nahazo fahazoana be indrindra ary ilay iray izay hatrizay dia matetika no raisina ho firesahana hiresaka momba ny hosodoko maivana. Tsikelikely dia namorona endrika samihafa ny mpanakanto nataonay ary niasa tamin'ny famoronana izay na dia tsotra aza ny fahitana azy voalohany dia tsy isalasalana fa nisy fiatraikany sy dikany lehibe momba ny fahatsapana ny sary, zavakanto, fanandramana ary mazava ho azy ny akon'ny zavakanto maoderina sy ny soritr'i Picasso amin'ny endrika sketches.
Endri-javatra sy ny dikany ny teknika
Zavakanto an-dalambe, firesahana amin'ny graffiti sy fahalalahana mamorona: Ao ambadiky ny sary hosodoko hazavana no ahitantsika ny dikany izay mitovy amin'ny hita ao ambadiky ny kanto an-dalambe ary tafiditra ao anaty filozofia graffiti mihitsy aza. Izy io dia fomba iray handikana ny fomba sasany amin'ny akademika, fomba furrowing fanandramana ary mahafoy ny lalàna. Tena misy na inona na inona mety ho lasa lamba manokana ananantsika ary amin'izany fomba izany dia azo tanterahina na aiza na aiza, na amin'ny endrika inona na any ivelan'ny paradigma na ny tetiarana teoretika.
Ny singa ephemeral sy ny lafiny ara-pientanam-po dia nampidirina tamin'ny maritrano maneho hevitra: Ny iray amin'ireo zavatra tena misy fiatraikany amin'ireny sary an'i Picasso ireny dia ny fomba fanehoana sy ny fanaovana zavakanto amin'ny alàlan'ny karazana "fampisehoana" satria ny mpanakanto anay dia miseho amintsika eo afovoan'ny fizotry ny famoronana ary voafono ao ambanin'ny tara-pahazavana. avy amin'ny asany manokana. Mazava ho azy fa mavesatra ny lanjany ao amin'ilay lahateny satria manasongadina ny toetran'ny fotoana rehetra manodidina antsika, na an'izao tontolo izao, na amin'ny zavakanto, na amin'ny andalan'ny zanak'olombelona mandritra ny fiainana.
Fanamarinana sy angano ny avant-gardes kanto: Noho ny vanim-potoana namolavolana azy ho loharanom-pahalalana kanto ary noho ny tarehimarika izay namolavola azy dia azontsika atao ny manasongadina fa ny fampiasana an'io teknika io amin'ny karazana firafitra rehetra dia amin'ny fomba soratra Protestanta. Misy ny famerenana amin'ny laoniny ny fanahy amin'ny endrika zava-kanto mamaly faty izay notohanan'ny vanim-potoana taorian'ny ady Espaniola sy ny avant-garde. Zava-dehibe ny kanto ary tsy manam-petra ny fisehoan'ny zavakanto: afaka mivaona amin'ny media rehetra izy io, amin'ny alàlan'ny teknika rehetra ary mazava ho azy amin'ny tanjona rehetra.
Jiro hosodoko amin'ny famolavolana logo
Noho izany rehetra izany, tsy mahagaga raha nisafidy marika famantarana ny teknika ny marika lehibe. Ny hatsaran-tarehin'ireo singa noforonina tamin'ny alàlan'ity teknika ity dia tsotra tsotra alaina tahaka tahaka ny ao amin'ny Adobe Illustrator na programa famolavolana nomerika hafa. Amin'ny fotoana maro dia ampirisihina mihitsy ity karazana logo ity satria rehefa dinihina tokoa, toy ny forona mavitrika, izy ireo dia maneho ny fisehoan'ny Light Painting amin'ny fomba azo itokisana kokoa ary indrindra ny manaitra. Dia avelako ohatra vitsivitsy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Logos entanin'ny hosodoko maivana